(tonga teto avy amin'ny Sabotsy)
Ny Asabotsy na Sabotsy dia andro fahenina ao amin'ny herinandro manomboka amin'ny andro Alatsinainy, fa andro fahafito kosa ao amin'ny ny herinandro manomboka amin'ny andro Alahady. Andro fahatelo izy ho an'ny herinandro manomboka amin'ny Alakamisy.
Tany Gresy fahiny ny andro Sabotsy dia antsoina hoe κρονία / kronia ka natokana ho an'i Satiorna. Izany no mahatonga ny andro Asabotsy hatao hoe Saturday amin'ny teny anglisy, izany hoe Andron'i Satiorna.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Asabotsy&oldid=966133"
Voaova farany tamin'ny 14 Febroary 2019 amin'ny 12:31 ity pejy ity.